ဒီလောက်သေချာနေတဲ့ စကားလုံးတွေကြားမှာ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မပြန်လာတော့ဘူး ဆိုတဲ့ စကားထက် ပိုနာကျင်ဖွယ် ကောင်းလှတယ်..
သူ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး.. အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲ .. အထီးကျန်စွာ... နောက်ပီး နာကျင်စွာ.. ပီးတော့ ယောင်ယမ်းပီးလဲ ကိုယ့်နာမည်ကို တမ်းတနေမလား.. သေချာတာကတော့ သူ အိမ်ကိုပြန်ချင်နေခဲ့မှာ….
သူ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး.. သူ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် ကိုယ်လိုက်သွားရမှာပေါ့… ဒါပေမဲ့ သူ ပြန်မလာနိုင်တော့လောက်အောင် သူရှိနေတဲ့ အရပ်က ကိုယ်လိုက်သွားလို့ရမယ့် အရပ် ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား…
ကိုယ်ကတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့လိုက်တယ်.. သူ ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်က လိုက်သွားရမှာပေါ့..
‘သူ ပြန်လာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပီး သူ ဘယ်တော့မှ လက်မြှောက်အရှုံးမပေးခဲ့ဘူးတဲ့.. ဒါကိုသိစေချင်ရုံပဲ.. ဒါပေမဲ့ နင့်ကိုတော့ မလိုက်လာစေချင်ဘူး’
အနီရောင်မျက်လုံးရယ်.. မှိုင်းညို့နေတဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်နဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကို မျက်လုံး အကြောင်သားနဲ့ ကြည့်နေမိတယ်.. သူ ပြန်မလာနိုင်တော့တာ ကျိန်းသေနေတာတောင် မလိုက်လာခဲ့နဲ့လို့ ပြောထွက်ရက်တဲ့ သူ့ကို နာကျည်းရမလား.. ကိုယ့်ကို သတင်းစကားလာပေးခဲ့တဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းကိုပဲ နာကျည်းပစ်လိုက်ရမလား.. အဆုံးမှာတော့ နှုတ်ခမ်းအစုံကိုသာ ပြတ်ထွက်လုမတတ် ကိုက်ခဲပစ်လိုက်တယ်…..
နင်ရက်စက်လိုက်တာလို့ ငါက စွပ်စွဲရမလားဟင်… နင် သွားမယ်လို့ ရည်စူးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင် ငါ့ကို ပေးမသိခဲ့ဘူး.. နင် တစ်ခဏ ပြန်လာခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းကလဲ ငါတို့ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ခဲ့လိုက်ရဘူး.. အခု နင် ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ စကားကျမှ ငါ့ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် သတင်းစကားလာပို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ နင့်လောက် ရက်စက်တတ်တဲ့သူ ရှိနိုင်ပါဦးမလား ဟင်…
ငါတို့တွေ ပျော်ရွှင်မြူးခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေလေ.. တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာ နင့်လက်ကိုဆွဲလို့ နင့်ဘေးမှာ တကောက်ကောက်လိုက်ပါခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ.. နင်က ရှပ်အင်္ကျီအဖြူလေးနဲ့ ကချင်ပုဆိုး အကွက်စိပ်ကို ဝတ်.. လက်ထဲမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုင်ပီး ငါ နားမလည်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေ ပြောနေတဲ့ အချိန်တုန်းကတောင် နင်နဲ့ငါ ဝေးရမယ်လို့ ငါ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး..
နင် ငါ့ဘေးမှာ ရှိမနေနိုင်တဲ့အချိန်တွေ များလာခဲ့တယ်.. ပီးတော့ နင် အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်နေခဲ့တယ်.. အမြဲ နဖူးကြောကြီးကို ရှုံ့လို့… နင့်လက်ထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အမြဲတမ်း ကိုင်ထားခဲ့တယ်.. ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကို အမြဲ ရေးချွတ်လို့….
နင့်ဘေးမှာ ငါနေလို့ မရတော့ဘူး.. နင့်ဘေးမှာ ငါမသိတဲ့ နင်နဲ့ အရောင်တူ ရွယ်တူ လူငယ်တွေ များလာခဲ့တယ်.. နင်တို့ တီးတိုး တီးတိုး သဖန်းပိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေ ပိုများလာခဲ့တယ်.. အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားခဲ့တယ်.. ငါ့ကို မသိစေချင်တာတွေ ပိုများလာတယ်.. လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ချိန်တွေ များလာပီး စကားပြောနေတဲ့ အချိန်တွေ ပိုနည်းလာခဲ့တယ်… နင်တို့ ပိုပီး လျှို့ဝှက်လာကြတယ်.. နင့်အခန်းထဲမှာ ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေမှ မရှိတော့ဘူး… နင့်အခန်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ပေးမဝင်တော့ဘူး.. အဓိက ကတော့ နင် ငါ့ကို မခင်တွယ်တော့ဘူး..
အဲ့ဒီနေ့ညက နင် ငါတို့ အိမ်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်.. အိမ်ရှေ့မှာ ခနရပ်တယ် ပီးတော့ ငါ့ရဲ့အခန်းကို နင်လှမ်းကြည့်နေခဲ့တယ်.. ပီးတော့ နင်လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်.. နင့်ဘေးမှာ လွယ်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်လေးကမှ နင့်ဘေးမှာ လိုက်ပါခွင့်ရခဲ့တယ်.. နောက်တော့ နင်ပျောက်သွားခဲ့တယ်.. နင်တို့အိမ်ကို လူအဝင်အထွက် များလာခဲ့တယ်.. နင့်အဖေ ရာထူးက အနားယူလိုက်ရတယ်.. နင့်အမေကတော့ ပိုအိုစာသွားခဲ့တယ်.. တစ်ဦးတည်းသော သားလေးကို လွမ်းရလွန်းလို့ နင့်အမေ အိပ်ရာထဲ လဲခဲ့တယ်.. ငါဘေးမှာရှိနေပေးပေမဲ့ နင့်အမေ လိုချင်တာက သူမရဲ့သားကလေးပေါ့.. ငါ့အတွက်ရောပဲ.. နင် ပြန်ရောက်မလာခဲ့ဘူး….
နင့်အမေရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို နင်ရောက်လာခဲ့တယ်.. သုဿန်ဝင်းထဲမှာ နင့်အမေရဲ့ အလောင်းစင်နားမှာ နင်ရပ်နေတယ်.. ငါသိတာပေါ့.. နင်ဘယ်လောက် ရုပ်ဖျက်ထား ရုပ်ဖျက်ထား နင့်ရဲ့ ဆံခြည်တစ်မျှင်က အစ ငါ မှတ်မိနေခဲ့တာ.. နောက်တော့ နင်လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်.. နင့်အမေကို နင်မကန်တော့သွားခဲ့ဘူး.. နင့်နောက်က ငါ အပြေးတစ်ပိုင်းလိုက်လာခဲ့မိတယ်.. နင့်အမေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာ နင့်ကို ဘယ်လောက်တမ်းတသွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး နင့်ကို ပြောပြချင်ရုံပါပဲ..…
နောက်တော့ နှစ်တွေ အကြာကြီး နင်ရောက်မလာခဲ့ဘူး..
နင့်သတင်းကို စကြားရတဲ့အချိန်မှာ နင်က လေးဘက်လေးတန် နံရံတွေကြားမှာတဲ့.. ပီးတော့ ငါတို့မြို့လေးနဲ့ မိုင်ရာချီဝေးလို့.. ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်လွန်းတဲ့ နေရာတဲ့.. လူဆိုးလူမိုက်တွေကို လိမ္မာလာအောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာတဲ့.. ဘဝရဲ့ ငရဲဘုံ.. လူ့ငရဲဘုံမှာတဲ့လေ…
နင်ဘယ်လိုများနေရှာမလဲ ဒီလိုအတွေးတွေနဲ့ ငါ ဆောက်တည်ရာ မရခဲ့ဘူး.. တုံတုံချိချိ နင့်အဖေက နင့်သတင်းစကားနဲ့တင် သွေးတွေ တက်လို့.. နင့်အမကတော့ မျက်ရည်တွေတွေကျပေမဲ့ နင်ရှိတဲ့နေရာကို ရောက်အောင် သွားမယ်တဲ့လေ.. အဲ့ဒီခရီးလမ်းက ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲပါစေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြမ်းတမ်းပါစေ.. နင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တင် ငါအရောက်လာခဲ့မယ်လေ..
နင် ကျန်းမာရေး အရမ်းဆိုးရွားသွားခဲ့ပီ.. နံရံတွေကြားထဲမှာနေရင်း နံရိုးကြားက သွေးယိုစိမ့်မှု.. အတွင်းထဲက ကလီစာတွေရဲ့ နာကျင်မှုကြောင့်တဲ့.. ဆေးရုံကို ပို့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားနောက်မှာတင် ငါတို့မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေ ကျိုးကြေကုန်ခဲ့ရဲ့.. ယုံကြည်မှုတွေ ရပ်တည်ချက်တွေ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှုတွေ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေ ဒါတွေနဲ့ နင် အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလို အသက်စွန့် ရပ်တည်ပြခဲ့မယ်တဲ့လေ..
နင် ထားခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက ငါနေခဲ့တယ်လေ.. နင် ငါ့အနားမှာ ရှိမနေနိုင်တဲ့ အချိန်တွေမှာ နင်ထားခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာပဲ ငါရပ်နေတုန်း.. နင်ပြန်လာရင် ငါ့ကို ရှာနေရမှာစိုးတဲ့စိတ်နဲ့.. ဒါပေမဲ့ အခုတော့ အခြေအနေတွေက ပြောင်းပြန်လေ.. နင်က ငါရှိတဲ့နေရာဆီ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး.. အဲ့ဒီတော့ နင်ရှိတဲ့နေရာကို ငါလိုက်လာရမှာပေါ့.. ငါ့ကို အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးတော့ ပေးပါ…
မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ.. အဲ့ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ.. အိပ်ရာခင်းအဖြူနဲ့အပြိုင် နင့်မျက်နှာက ဖွေးဖွေးဖြူလို့.. နင့်မျက်နှာမှာ ငါအမြဲမြင်နေခဲ့ရတဲ့ ပါးချိုင့်လေး မရှိတော့ဘူး.. အဲ့ဒီနေရာမှာ ကြောက်စရာ ပါးရိုးငေါငေါကြီး.. ပီးတော့ နင့်ရဲ့ အသားအရေတွေ ဖွစုတ်စုတ် ပီးတော့ ညစ်ထေးထေး.. နင့်ရဲ့ အမြဲ ကြည်လင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေက အခုတော့ ချိုင့်ခွက်ဝင်လို့.. ငါတို့ကိုတောင် မျက်လုံးဖွင့်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး.. ငါတို့ကို နှုတ်ခွန်းဆက်စကား မဆိုနိုင်ဘူး.. နင့်ရဲ့ ပါးစပ်ပေါ်မှာ အသက်ရှုကိရိယာကို တပ်လို့.. အသက်ကို ပင်ပန်းကြီးစွာ ရှုနေရတဲ့ နင့်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကတော့ တင်းထားတုန်း.. မာန်ပါနေတုန်း…
ငါ့ကိုလိုက်မလာစေချင်တဲ့အကြောင်း အခုတော့ ငါသိပီ.. နင့်ရဲ့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ ငါ့ကို မမြင်စေချင်လို့လားဟင်.. ငါပါလာတယ်ဆိုတာကို နင်သိလို့ နင့်မျက်လုံးကို ဖွင့်မကြည့်တာလားဟင်.. နင်လိုက်မလာစေချင်တဲ့ ငါ့ကို လိုက်လာခဲ့လို့ နင် စိတ်များ ဆိုးနေခဲ့တာလားဟင်.. ငါ့ကို တစ်ချက်လောက်တော့ မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါဦးဟာ…
သူ့ရဲ့လက်တွေက လေထဲမှာ ဝှေ့ယမ်းနေခဲ့တယ်.. အသက်ရှုသံက တဖြည်းဖြည်းကျယ်လောင်လို့.. မဟုတ်ဘူး ရင်ဘတ်ထဲက အသံတွေ.. မဟုတ်ဘူး.. သူ နှုတ်ဆက်နေတာလား.. သူ့ရဲ့လက်ကို အတင်းဆုပ်ကိုင်ထားမိတယ်.. ငါ့ရဲ့လက်ကို မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့.. ငါ့လက်ကို နင်လွှတ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီအဝေးကြီးကို နင်ထပ်ပီး ပြေးသွားဦးမှာ..
မသွားလိုက်ပါနဲ့ မသွားလိုက်ပါနဲ့နော်.. ငါ့လက်ကို ကိုင်ထားပါဦး.. ဟင့်အင်း.. သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်က ပေါက်ကွဲထွက်တော့မယ် ဖားဖိုလို.. သူ့ရဲ့ မျက်လုံးအိမ်ဘေးမှာ မျက်ရည်စီးကြောင်းတစ်ခု.. ဟင့်အင်းနော်.. ငါ့အတွက်တော့ မျက်ရည်မကျပါနဲ့.. မသွားပါနဲ့ ချစ်သူရယ်…..
လူတွေ လူတွေ ကျမကို အတင်းကြီး တွန်းဖယ်ပစ်လိုက်တယ်.. ပီးတော့ သူ့ကို အတင်းဖိ အတင်းရိုက်.. နံရံဘေးမှာ ရပ်နေရင်း မျက်ရည်ကျဖို့လောက်တောင် အားအင်မရှိတော့.. ထူးဆန်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ.. သူ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့လက်ရဲ့ နွေးထွေးမှုက အခုအချိန်အထိ ကျန်နေတုန်း.. ပီးတော့ ဆုပ်ညှစ်ခံထားရတဲ့အတွက် စူးရှရှ စပ်ရှိန်းရှိန်း.. ပီးတော့ နာကျင်မှု.. ဒီလက်ကို သူလဲ တအားဆွဲကိုင်ထားခဲ့တာ.. နောက်ဆုံးတော့ လွတ်မြောက်ထွက်သွားခဲ့ပီ…
သူ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး .. တဲ့.. ကိစ္စမရှိပါဘူး… သူရှိတဲ့ နေရာကို ကျမ လိုက်သွားရမှာပေါ့…………….
(၆-၆-၂၀၁၀၊ ၁၁း၂၅ pm)
at 9:26 AM Labels: ဝတ္ထုတို
littlebrook May 6, 2010 at 10:37 AM
တော်သေးတာပေါ့ အတွေးလေးမို့လို့ အတွေးကြီးသာဆိုရင် ဘယ်လိုနေမယ်မသိ .. ကောင်းလိုက်တာဟ
ရေးတတ်တယ် (ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာထက် ပိုနာကျင်ဖွယ်ကောင်းတယ် ) ဟူးးးးးးး
ahphyulay May 6, 2010 at 3:35 PM
အင်း.. ပြောရမယ် ဆိုရင်
အစား ထိုး လို့မရ နိူင် တော့ တဲ့ကြယ် တွေ ပါပဲ ။
လုပ်နိူင်ခဲ တဲ့အလုပ် ကို ရွပ်ရွပ် ချွန်ချွန် ဦးဆွေး ဆံမြေ့ 
လုပ်နေ ကြသူ တွေ ပါလို့ ။
အာဇာနီ တွေ အလွန် ထွန်းကား တဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်နေပေမဲ့ ...
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းပါဘူး ဗျာ...။
မိုးခါး May 6, 2010 at 5:29 PM
ဖတ်ပြီး ခံစားရတယ် .. မတရားဘူး
မြစ်ကျိုးအင်း May 7, 2010 at 10:33 AM
ဒီအချိန်မှာတော့ ဒါဟာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး ထွက်ပေါက်ပါပဲ ညီမလေးရေ သူသွားပါစေ ခွင့်ပြုလိုက်ပါ
ဒါပေမယ့် သူစိတ်မဖြောင့်တာတော့ သေချာတယ် ပြီးတော့ သူမသွားချင်သေးတာလည်း သေချာတယ်လေ
သူ့လို ဘဝတူများ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ
ခင် May 7, 2010 at 11:00 AM
purplemay May 8, 2010 at 1:46 AM
ခံစားရတယ် ညလေးရယ် .....။ စွန့်လွှတ်တဲ့သူတိုင်း ဒီလမ်းကို သွားကြရတာပဲနော်.....း( စိတ်မကောင်းဘူး ....ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး....။